Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Hadlay Weerarkii Siinka-dheer. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Hadlay Weerarkii Siinka-dheer.
Afhayeenka ciidamada Xarakada Shababul Mujaahidiin Sheekh Cabdul Caziiz Abuu Muscab oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada Mujaahidiinta ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah dalalka Somali iyo Kenya.
Sheekh Abuu Muscab ayaa ugu horeyntii faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay weerarkii Istish-haadiga ah ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay isbaarada maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka dhigteen deegaanka Siinka dheer ee dhaca wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Afhayeenka ayaa xusay in weerarkaasi uu fuliyay Mujaahid ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta Shabaabul Mujaahidiin’waxa uu carabaabay in weerarkaasi ay ku dileen Sagaal askari Shan kalane ku dhaawaceen.
Sidoo kale Sheekh Abuu Muscab waxa uu faahfaahiyay weeraro kala duwan oo ciidamada Mujaahidiinta ka kala fuliyeen duleedyada magaalooyinka Kismaayo iyo Gaariso.